Cabdi Ileey Oo Ku Dhawaaqay Inuu Is Casilay. – Calamada.com
Cabdi Ileey Oo Ku Dhawaaqay Inuu Is Casilay.
calamada August 6, 2018 1 min read
Wararka ka imaanaya magaalada Jigjiga oo ka mid ah dhulka Xabashida Itoobiya xooga kaga heysata Somalia ayaa sheegaya inuu iscazilay madaxweyne ku sheegii dowlada Xabashida Itoobiya ugu magacownaay dhulka Soomaali Galbeed.
Is Cazilaada Cabdi Ileey ayaa timid kadib markii maalmihii lasoo dhaafay magaalada Jigjiga iyo kuwa kale oo isla dhulkaasi ah ay ka bilowdeen qalalaaso u dhaxeeya ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya iyo maleeshiyaatka Ridada Liyuu Booliska ee maamulka Murtad Cabdi Ileey.
Wararka la helayo ayaa sheegaya in dowlada Xabashida Itoobiya xilka madaxweynaha maamulkaasi ay u magacaabeen Murtad Lagu magacaabo Axmed Cabdi Maxamed (Ilkacase) oo hore u ahaa wasiirka Maaliyada ee maamul ku sheegaasi.
Qalalaasaha ka jira magaalada Jigjiga ayaa sababay dhimashada iyo dhaawaca dad fara badan oo shacab ah,iyadoona saacadihii lasoo dhaafay meydad hor leh laga helay magaaladaasi.
Halkan Ka Booqo Chenalka Calamada Ee Telegram-ka.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Duhurnimo 24-11-1439 Hijri.
Next: Halkan Ka Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm 24-11-1439 Hijri.